Yini ongayilungiselela izingane etafuleni lokugubha
Ngakho-ke izingane kufanele zilungiselele itafula lezinsuku? Kungcono ukulungiselela into ewusizo futhi enhle kuye.
Iminyaka engu-1 kuya kwemi-3
"Ngesonto lokuzalwa kukaPlato, ngangilahlekelwa imilenze yami: Ngapheka isobho kanye nama-mbatata, iziqu zemifino kanye ne-beetroot isaladi ngemifula. Ngokuvamile, ngizame ukwakha itafula njengento ewusizo futhi ezithakazelisayo ngosuku lwethu lokuzalwa nezivakashi. Futhi cishe isigamu sehora ngaphambi kokuqala kweholide, sanquma ukulungisa amashadididi amancane, ahlotshiswe ngokuhloswe - ama-canapés. Yilabo abajabulela ukuphumelela noPlato, kanti ezinye izinto zokugcoba zazinconywa, ngoba umfana omncane wayejabule kakhulu ukuba abe nesidlo esivamile, "kusho uCatherine, umama wePlato oneminyaka emibili ubudala." Ngempela, ukuthanda izintandokazi ezincane ezingaphansi kwezintathu kuvamile , futhi isimiso sezinzwa sisanda futhi siyancipha kalula. Ngakho-ke, lapho simema izivakashi endlini, akufanele silindele ukuthi lo mfana uzohlala etafuleni, ekhothamela izitsha eziphekwe ngumama, okungukuthi, ingane izohlala phansi etafuleni, futhi, cishe, kodwa angicabangi ukuthi kungenzeka ukuthi badle ngaphansi kokubukeka kukagogo, omkhulu kanye nezinye izihlobo ezinganeni. "Ngakho isiphetho: ukondla umntwana kusengaphambili, ngaphambi kokufika kwezivakashi." Ngokuvamile ingane encane idla i-cottage shizi? ngeke siphule lesi siko esihle!
Omama abaningi emini yesigubhu bayazibuza ukuthi yini abazoyipheka izingane etafuleni lokugubha. Yondla ingane ngezingubo ezijwayelekile, khona-ke etafuleni lokugcoba uzoziphatha kahle.
Futhi ukuze unogwaja wakho omncane ongenalutho ungagodli isaladi kusuka esitsheni esivamile sesaladi futhi unamathele umunwe wakho emakhazeni endlebeni kaMalume Kolya, ubeke izitsha eduze komntwana, ibalwa ngokuqondile kuye. Kungaba yi-canapés efanayo - ama-sandwich amancane amaningi anemibala ngokuqinisekile ayoheha ukunakekelwa kwezingane. I-Canapes ingenziwa kalula ngesinkwa segorosi noma i-rye, noma kusuka ezinkanyeni zokugcoba, okwenziwe kahle, ihlukaniswe yaba izibalo ezinamamitha angaphezu kwamamitha angamahlanu futhi ibhaka kuhhavini. I-Canapes ingenziwa ngemifino, izithelo, ama-fat-cheese aphansi, i-pâté eyenziwe ekhaya evela eTurkey. Into eyinhloko ukuthi ama-sandwiches amancane abukeka emuhle futhi ekhangayo. I-plate plate izotholakala etafuleni. Kumntwana kuyadingeka ukucubungula izithelo bese uyinquma zibe tincetu ezincane, ngakho-ke umcengezi angakwazi ukubeka ucezu oluthandwayo emlonyeni wakhe bese kungagxili. I-pastila yasekhaya, ukomisa kanye namabhisikidi ebantwaneni - lokho kuyindlela yokwelapha ilanga lakho futhi lilungele.
Umthetho wokuqala uwukuthi: ukuthi isidlo sidliwe, kufanele sibe mnandi futhi sijabulise.
Thatha i-oatmeal efanayo: into eyodwa yiphunga elimnandi, isakazeka phezu kwepuleti ejulile, futhi enye impela - iphalenda efanayo, kodwa ihlotshiswe nge-jam-peinted funny muzzle, izithelo ezigcotshwe kanye namantongomane. Futhi uma lokhu kudla okumnandi ku-pial okuhle noma i-kremanka, khona-ke ngeke kube khona ukukhanya kulabo abafisa ukuxoshwa. Kodwa i-porridge yiqiniso, icala elibi kakhulu (isibonelo). Ungakwazi ukuhlobisa (futhi udinga!) Noma iyiphi isidlo, kungakhathaliseki ukuthi amazambane casserole noma ikhekhe ushizi. Kubalulekile ukukhonza kahle ithebula. Cha, akudingekile ukuba ususe umsebenzi we-porcelain kusuka kunogogo kusuka ku-buffet. Isixazululo esihle kakhulu futhi esiwusizo sizoba izitsha ezilahlwayo. Kodwa akuyona evamile, emhlophe, kodwa imikhosi: enemibalabala, ejabule. Amacwecwe namagalasi angeke aphule, ngaphandle kwalokho akudingeki ukuba agezwe. Beka amaphilangwe amakhulu ephepha eceleni kwepulani ngalinye. Ungabi ovilapha kakhulu ukuhlobisa i-napkins nezibuko ngezimpawu ezihlekisayo noma imidwebo.
Enkampanini enhle neviniga kuyinto enhle!
Ngakho-ke ukubusa kwesibili: abangane abamemezayo ukuvakashela imvuthu, ungabavimbeli ukuba bajabulele inkampani yomunye nomunye.
Cha, izingane ezithokozayo, yiqiniso, kufanele. Imincintiswano, imidlalo kanye nemibukiso ye-puppet yasekhaya yamukelekile kuphela. Kodwa uhlale nezingane etafuleni, uzibophe ngazo zonke izinhlobo zokudla uphinde uzisuse yonke iminithi: "Vasya, ungakhulumi ngemilenze yakho!", "Katya, thola izingubo zakho etafuleni!", "Pauline, yula izandla zakho nge-napkin!", Ungayifaki. bese ushiya ngobuhlakani okwesikhashana, vumela izingane zizwe injabulo yokudla kwazo okuzimele, futhi phakathi nedili elinjalo, ukudla okuqinisekile kuzofika!
Imithetho yesithathu (ivivinywa isikhathi): zonke izingane (ngezinye izinto ezingavamile) zibe nesimo sengqondo esihle kwezitsha ezifana ne-pasta, amaphayi nama-pancake.
Ngamunye walezi zitsha zingenziwa ezihlwabusayo kakhulu, ezanelisayo futhi eziwusizo. "I-Macaroni e-Navy" isidlo esiphelele se-pirate ye-pirate, i-pie nenkukhu kanye nemifino ebabazayo (noma i-pie inhlanzi) iyindlela engcono kakhulu yokugaya ama-hamburgers nabanhlanzi bezinhlanzi. Amapancake anezinhlobonhlobo zokugcwalisa (inyama, i-cottage shizi, i-cherries) ngokuqinisekile iyojabulela amantombazane aphuphayo ukuphuza itiye njengoMalvina.Kuhle kakhulu, siphumule izitsha ezidlayo, siya enkambeni enkulu, ngoba iholidi akuyona iholidi, uma etafuleni, njengokungathi ngomlingo, ngokuzumayo amnandi ngeke avele.
Inkosi yakhe iCake
"Sinqume ukugubha usuku lokuzalwa lokuqala lukaMila ngezinga elikhulu - siyala ikhekhe esitolo se-confectioner cishe nosayizi wesifazane wokuzalwa naye. Kulezi zivakashi kwakungabangane bami ababili nabantwana abaneminyaka eyodwa nesigamu nambili ubudala. Mile, nginikeza i-cake encane, kodwa izivakashi zayo ezincane zaxabana futhi zafuna ukungezwa. Ngenxa yalokho, omunye wabo ngosuku olulandelayo wayenezinhlanhla ezimbalwa kanye nesichazamazwi emathunjini. Abazali bezinyosi babengajabuli kakhulu. "Yiqiniso, usuku lokuzalwa lokuqala kufanele lukhunjulwe isikhathi eside, kodwa hhayi ngenxa yekhekhe elihle. Kunezinye izindlela eziningi ezingahlobene nokupheka, kodwa ngazo - esikhathini esilandelayo. Namuhla - mayelana namaswidi. Iminyaka emithathu kungcono ukunganiki ikhekhe amaqebelengwane, ama-chocolate kanye namaqebelengwane, lapho, njengokubusa, kuningi kakhulu izithako ezingathandekiyo: amadayi, ama-preservatives, ama-flavorings. Ngokuqinisekile uzoqiniseka.
Amaswidi amancane iminyaka engu 2-3 unganikeza i-marshmallow, i-pastille noma i-marmalade. Lawa maswidi anama-pectin enempilo.
Amakhukhi (ikakhulukazi akhiqiza), ukomisa, ama-bagels, ama-gingerbreads nawo amamukelekile etafuleni elimnandi lezimbuzi. Esinye isidlo esiwusizo siyisaladi lesithelo. Izithelo ezinomsoco, oqoshiwe (i-banana, i-pear, i-apula, i-apricot) uthele ukhilimu omuncu omuncu noma ogwayi omuncu. Ukuhlobisa isaladi nge-berry ekhanyayo noma imbewu yamagilebhisi. Inkampani enkulu yabantu abaningi, ngaphandle kokubhaka ekhaya, sicela u-ayisikhilimu. Yiqiniso, kungabuye kuphekwe nguwe - ngakho-ke ukudla okunambithekayo kuyoba yingozi kakhulu, kodwa le ndaba kunzima kakhulu. I-ayisikhilimu eyenziwe yenziwe ngesisekelo sobisi, ukhilimu, izikhupha zamaqanda noshukela. Kulesi simo, ungasebenzisa noma yiziphi izigcawu: i-cocoa, amantongomane, amajikijolo, izithelo, ujamu, amakhukhi, ushokoledi oqoshiwe. Ukulungiswa ngokucophelela kokudla okunomsoco kuvela ngendlela engavamile futhi enesidingo.
Yenza nje kusengaphambili akusikiswanga: ku-ice cream amakristalu e-ayisikhilimu akhiwa ngokushesha, futhi athola isakhiwo esingajabulisi seqhwa. Noma kunjalo, ngisho ne-plombier ezithengiwe ngokuqinisekile kuyobangela isiphepho se-ecstasy. I-ayisikhilimu ye-ayisikhilimu noma i-dessert nge-saucers encane noma i-kremanki (isabelo akufanele sibe sikhulu, ukuze ingane ingabambi ibanda, ibhola elilodwa lanele), ukuhlobisa ngamantongomane aqoshiwe, izithelo, amajikijolo amasha. Ungangeza i-jam encane noma i-jam. Futhi-ke, ungakhohlwa mayelana nekhekhe. Uma izinhlanzi ezineminyaka emibili zithokozisa ngokufanayo futhi i-charlotte yomama ne "Napoleon" enkulu, izingane zasenkulisa zivele zikwazi ukuqonda ukunambitheka nobuhle balekhekhe.Khetha amaqebelengwane ngaphandle kokweqa kwamafutha okhilimu, ukungenisa utshwala kanye nezithasiselo eziyingozi.Kungakhohlwa ukuthi izingane ngeke zikhumbule kakhulu ukunambitheka ikhekhe, kungakanani umkhathi wokugubha olawula ngesikhathi sokuphuza itiye .Ngakho-ke, zama ukuyibeka kuqala: vala ukukhanya, ukhanyise amakhandlela (ngekhekhe - ngosuku lokuzalwa, etafuleni - phakathi namanye amaholide omndeni), bamba ndawonye d Uma unesikhathi kanye nemizwelo - ugqoke izingubo zokugqoka noma ama-caps shiny amahle - lungiselela izinto ezincane ezilula, makabe yizintambo, ama-postcards noma ama-cute gingerbread ngesimo sezilwane ezincane-izingane ziyabonga noma yiziphi izipho nezibonakaliso zokunakwa. Leli holide elijabulisayo lizokhunjulwa! Futhi ngisho noma izitsha etafuleni lakho zingaboniswa ngokukhethekile.
Yiziphi izinzuzo zokusanhlamvu?
Nini ukuqala ukunikeza izingane zokuheha?
Ingane ayifuni ukuzidla yona
Impilo yengane ithinta kanjani isimiso nsuku zonke kanye nokudla okunomsoco?
Iqoqo lemikhiqizo yengane ezinyangeni ezingu-9
Ushizi owenziwe: ukuzuza nokulimala
Ukudla kwezingane kusuka ezimbizeni
Izakhiwo eziwusizo ze-cashews
Amadoda yibapheki abahamba phambili
Inkukhu isibindi ngamakhowe ngosawoti omuncu
Indlela Yokwenza I-Makeup Evening ekhaya
Burn ama-khalori ane-spray spreader
Indlela yokulondoloza impilo yokuzala ngesikhathi esincane
Amaholide omndeni otholile
Umngani wami wathandana nomashiqela, angamsiza kanjani?
Ingabe kufanelekile ukwakha ubuhlobo nomuntu ohlukanisile
Isaladi kusuka ku-sauerkraut enezithelo ezifakwe emathisini
Yeka ukuthi uKotti Topuria okhulelwe "wagijima" kanjani ku-Astana ku-Muz-TV
Amaqiniso athakazelisayo ngo-Angelina Jolie
Ungasusa kanjani i-wax kusuka izingubo?
Yini oyidinga ikati?
Ungakugeza kanjani ijazi lakho?